Ogaysiis: Kal-Fadhigii OVP oo la Qaban Doono 16 October 2009 – Rasaasa News
Oct 4, 2009 Conference, Ogaden Voice of Peace
Kal-fadhiga sanadlaha ah ee Ururka ayaa waxaa lagu martiqaadaa sanad walba, Aqoonyahano, Siyaasiyiin iyo wax garad ka kala socda Somalida Ogadeniya iyo Maraykanka, oo qaarkoodna wax ka dhiga Jaamacadaha qaarna ay siyaasadda Mareykanka u qaabilsan yihiin arimaha Geeska Afrika. Sanadkan waxaa halku-dhag u ah kal-fadhiga “Challenges and Opportunities in the Horn of Africa” oo macanaheedu yahay Babacdhiga iyo Fursadaha ka jira Geeska Afrika. Kal-fadhiga oo lagu qaban doona qolka shirarka Jaamacadda ayaa sanadkan lagu martiqaaday, in ay ka hadlaan, aqoon yahano badan oo ka soo jeedin doona hadalo ama ka qayb gali doona doodaha la xiriira dhibaatada lagu hayo shacabka Ogadeniya iyo siddii loogu heli lahaa xal waara oo nabad ku soo dabaala Ogadenya.
Waxaa ka mid ah aqoonyahanadda ka hadli doona madasha shirka;
1. Mr. Charles F. Dambach oo ka hadli doona doorka uu qaadan ka qaadan karo daraf 3xaad xalinta dagaalada.
2. Mr hamse Warfaa oo ka hadli doona sidii nabad loogu heli lahaa gobolka Ogadenya isagoo baaraya asbaabta keentay dagaalada ka socda.
3. Mrs. Fawsiya Cabdiqaadir oo ka hadli doona xaaladaha xuuqul insaanka ee ka jira Ogadenya.
4. Mrs. Rory Linnane oo ka socota University of Wisconsin ayaa ka jeedin doonta madasha shirka dhibaatadii loo gaystay dadkii Mareykanka ahaa ee lagu qabsaday Itobiya.
5. Mudane Cali Khaliif Galaydh rai’isal wasarihii hore ee Somaliya ayaa ka mid ah dadka lagu martqaaday oo la filayo inuu ifiyo xaaladda ka jirta dalkaa iyo doorka ay Itobiya ku leedahay dagaansha la’aanta ka jirta Somaliya iyo Ogadenya.
Waxaa iman doona oo lagu martiqaaday shirka ergay ka socda dawladda Mareykanka oo ka socda xafiiska arimaha bariga Afrika u qaabilsan Wasaaradda Arimaha Dibadda oo ka hadli doona siyaasadda dawladda Amerika ee Geeska Afrika.
Fadhiyada doodaha ayaa waxaa si wadajir ah u maamuli doonaan;
1. Adan Cabdi oo maareyn doona dooda ah – “Influencing Public Policy” .
2. Axmad Sahid iyo Horseed Noox oo mareyn doona dooda ah – “The role of Communities.”
3. Mrs. Huda Yusuf oo maareyn doonta dooda ah “what shoul be included in a resolution”.
Ururkan OVP iyaa mudadii yareydee uu dhisnaa qabtay hawla badan oo dhaxalgal ah, isagoo ku soo jeediyay indhaha siyaasiyiin iyo aqoonyahno badan oo reer galbeed ah dhibaatada ka jirta Ogadenya iyo siyaabihii xal waara oo ku dhisan cadaalad iyo nabad loogu heli lahaa.
Waxqabadkii ururka OVP intuu dhisnaa iyo ahdaaftiisa guud waxaad ka heli kartaa bogga ururka ee ah: www.ogadenvoice.org